Ngishumeka kanjani i-Iframe ku-SharePoint? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > I-webpart ye-sharepoint iframe - indlela yokuphatha
I-webpart ye-sharepoint iframe - indlela yokuphatha
Ngishumeka kanjani i-Iframe ku-SharePoint?
Faka ikhasi bese uya kumodi yokuhlela yekhasi. Chofoza ku-Shumekaikhodi ezovula i-pop up lapho singanamathisela khonaiframeumaka up. Ngemuva kokungeza umaki phezulu, chofoza kuFaka. Lokhu kuzokwenzashumekaidokhumenti / ividiyo ekhasini.Septhemba 26 2016
>> Ngiyabonga ngokungijoyina.
Ngijabule ukukubonisa amathuba wokuthi yini esingayenza nge-intranet yakho yomphakathi. Ake siqale ngokubheka uYammer. Uyamazi uYammer ovela ekuxhumaneni kwenhlangano yakho ezifundeni eziningi nakuzo zonke izifunda eziningi, izici nezindlela eziningi zokuxhuma abantu enhlanganweni yakho yonke.
Singacabanga ngeYammer ngokwemiphakathi ongayakha. Kokubili imiphakathi esebenza kanye namaqembu anentshisekelo, kanye nethuba lokuletha abantu endaweni lapho bangaxhumana nabaphathi. Ngiletha lapha enye yezinto esizenzayo kwaMicrosoft.
Sineqembu likaSatya umphathi wethu futhi angabelana ngemibono nokuqonda kwakhe ngokwenzeka ngaphakathi enhlanganweni lapho, ngithola nempendulo enkulu evela kithi nakubasebenzi bakhe, uma ngidlulisa amehlo kimi uzobona ukuthi nginomdlandla futhi umphakathi ocebile, abantu bayabandakanyeka, babelana kabusha ngama-athikili nezingxoxo futhi kuyindlela enhle yokwenza lokhu kahle ukuqonda izwi labantu bakithi nokuqonda ukuthi ithimba lethu lobuholi eliphakeme licabangani njengoba ngibheka lokhu cabanga kulungile, bekungeke kube kuhle uma bengingaba nale ngxoxo ingxenye yengosi yethu ye-intranet. Njengabaningi benu enkampanini yenu, sinamasayithi e-intranet asiza ngempela ukugcina okuqukethwe kwakamuva okuthunyelwe Ukukuveza ngokombono wezindaba, mhlawumbe izindatshana noma amabhulogi avela kubaphathi bethu abaphezulu. Ngingethula lokhu okuqukethwe njengengxenye yalokho Esikubukeza isiza sokuxhumana se-SharePoint lapha, futhi njengoba ngikuphenya uzobona ukuthi nginezingxoxo ezinhle ezivela emphakathini wami waseYammer, futhi ngiyabona ukuthi nginezindatshana zezindaba, futhi njengama-polls nama-polls nezinye izingxenye zewebhu engiqondayo ukuthi zingakwazi ukuvela njengengxenye yazo.
Ngiyabona okuqukethwe kwakamuva, imibhalo yenqubomgomo, izinqubo, noma yini ofuna ukuyaba. Kepha kusizakala impela ngalawo makghono wokuxhumana amakhulu esiwakhile ku-S harePoint, ngakho-ke ake sihlole okwengeziwe ngalokho esingakwenza ngeYammer bese sondla lezo zingxoxo kumawebhusayithi akho okuxhumana kanye nakumawebhusayithi wakho akhona weqembu. Ngizoqhubeka futhi empeleni ngidale iwebhusayithi entsha ngokuphelele.
Futhi uma ubheka leli sayithi elisha futhi ukhetha isifanekiso, singacabanga ngezinketho ezahlukahlukene esingathanda ukuzisebenzisa. Uma ngibheka amasayithi ethimba, kumayelana nokusebenza ndawonye usuku nosuku, futhi ngalokho, mayelana nalelo qembu elingumongo labantu osebenza nabo futhi uqonde ukuthi kugxilwe kokuqukethwe ngempela. Ngizoya kwiwebhusayithi yokuxhumana.
Iwebhusayithi yezokuxhumana imayelana nokwazisa ngokuphelele nokusebenzisana nesisekelo sakho sonke. Mhlawumbe kuyinto ethize mayelana nephrojekthi yakho ofuna ukuyihlanganyela neqembu elibanzi lababambiqhaza enkampanini yakho, noma ingakusiza ukuxhumana ngemininingwane emisha noma wenze iqembu elisha lesikhulu esithile ofuna ukusaba kuwebhusayithi yezokuxhumana isiqalo esihle. Ngingakhetha lezi zakhiwo ezihlukile, isibonelo: Nginezindikimba, nginekhasi lesethulo engingakhetha okuthile.
skype umlando wokuxoxa
Ngakho-ke ngichofoza ku-'Isihloko 'bese sinikeza leli sayithi igama. Ngizothi ibizwa ngokuthi 'Ubuholi Bokuxhumana' futhi isayithi liyingxenye yalo, ngizochofoza encazelweni yesayithi engingayigcwalisa ngokuhamba kwesikhathi futhi ngiphinde nginikeze imininingwane yokuhlukaniswa. Kulokhu, kuyinjongo ejwayelekile njengoba noma ngubani oku-intranet yami angayithola.
Ungenza ngezifiso la mazinga okuhlukaniswa kwamasayithi ngokususelwa kulokho okudingayo. Ngizoshaya inkinobho ethi 'Qeda' lapha bese leli khasi elihle lokuxhumana lizokwakhelwa mina khona manjalo. Enye yezinto ezinhle esinazo njengengxenye yale sayithi yezokuxhumana ukuthi kulula kakhulu ukuza nokuqukethwe okudingayo.
Lapho isiza sesiphezulu, uzobona Ngithola Ingcebo Yezici. Uma ngibheka ngalokhu ngiyabona, 'Kulungile, lolu ulwazi engiqonda ngalo ukuthi ngenzeni lapha.' Nginezindaba, ngingahle ngibe nemicimbi engifuna ukuyethula, amadokhumende ahlukahlukene, 'Ngibheke konke okukhona lapha.
Engifuna ukukwenza, noma kunjalo, ukuqiniseka ukuthi ngiyakwazi ukungena ezingxoxweni zami ngivela kuYammer. Ngizoshaya inkinobho ethi 'Hlela', futhi ngizohlinzeka ngemihlahlandlela ehlukahlukene lapha. Uzobona ukuthi nginezikhefu zesigaba lapha kusayithi ukuze ngikwazi ukudala izigaba ezahlukahlukene lapha njengengxenye yokuhlelwa kwekhasi lami.
Ngingangeza amakholomu ambalwa uma ngifuna ukwabelana ngokuhleleka, noma ngingavele ngichofoze lapha bese ngivula igalari yengxenye yewebhu, uma ngichofoza uzobona ukuthi ngithola zonke izingxenye zewebhu ezitholakalayo kimi njengengxenye ye-SharePoint. Kukhona isethi yezinto ezicebile ngempela esinazo lapha. Ngingachofoza lapho ngidlula khona, kungenzeka ukuthi usuvele wazi ezinye zalezi esizibonise ngenhla.
Ikhasi libizwa ngokuthi yiHeroes Web Part futhi imvamisa linokuqukethwe okuningi nezithombe. Sine 'Amafomu e-Microsoft' esingawasebenzisa ukwenza ucwaningo nokuvota. Futhi sinengxenye yewebhu 'Yabantu' ukukusiza ekuboniseni ochwepheshe noma abantu okufanele uxhumane nabo njengengxenye yephrojekthi yakho.
Futhi-ke sine-'Twitter 'futhi ekugcineni' uYammer '. Ngakho-ke ake sikhulume ngengxenye yewebhu yeYammer nokuthi singasiza kanjani ukwenza lolo xhumano phakathi kwesayithi lethu le-intranet zombili nezingxoxo onazo emphakathini wakho, futhi uma ngidlula lapha uzobona ukuthi nginezinketho eziningana. Kepha konke kuqala ngokukhomba umphakathi wakho wakwaYammer, ngakho-ke ngizothayipha i-CEO Connection futhi uzoyibona igcwala ngokuzenzakalela.
Ukubalwa kwabantu ngokuzenzakalela manje kwenzeka ngoba ngingene ngemvume ku-Office 365 futhi ngiyayazi imiphakathi yaseYammer engikwazi ukufinyelela kuyo. Uma ngichofoza ku-CEO Connection, uzobona ukuthi nginikezwa izinketho eziningi. Ngiyabona vele ukuthi kukhona okunye okuqukethwe uma ufinyelela lapha njengengxenye yengxenye yami yewebhu uzobona ukuthi kukhonjiswa ngefomethi enhle yemephu.
Ngiyabona lapha ukuthi nginezinketho eziningi ezahlukahlukene. 'Izingxoxo Eziphezulu' zingivumela ukuthi ngibonise izingxoxo ezithandwa kakhulu eqenjini. Ngakho-ke lokhu kuyindlela enhle uma nje ufuna ukwenza abantu babambe iqhaza emphakathini wakho.
Mhlawumbe lesi yisikhathi sabo sokuqala ukungena emphakathini wakho ngokusebenzisa isayithi lakho le-intranet. Ngakho-ke le kuyindlela enhle yokuthi nansi into edumile, nazi izimpendulo, mhlawumbe inani lokuthandwayo. Kuyindlela enhle yokubonisa izingxoxo ezidumile futhi uzigcine zibuyekezwa.
Uyabona ukuthi nginenketho lapha yezingxoxo zakamuva futhi. Futhi lezi zingxoxo zakamuva ezomuntu siqu kuwe. Ngakho-ke kuleli cala, uma usuyilungu leqembu le-CEO Connection futhi wavakashela lokhu okuqukethwe njengengxenye yeYammer, uzobe ubona izingxoxo zakamuva selokhu wagcina lapho.
Le yindlela enhle yokuhlala usesikhathini nangendlela engcono kakhulu. Njengoba kungeyakho uqobo, sivame ukubheka le ndatshana yengxoxo esikahle njengendlela yokubonisa imininingwane kuwebhusayithi yeqembu, mhlawumbe okuthe xaxa kunaleyo ekuwebhusayithi yokuxhumana. Kepha unenketho.
Ungakhetha ukuthi iyiphi esebenza kangcono kuwebhusayithi yakho kanye nendatshana noma ikhasi olakhayo, nokuthi ungabandakanya kanjani lowo mphakathi kangcono. Akudingeki ukuthi wenze lokhu unomphela, ungahlela ukusethwa nganoma yisiphi isikhathi futhi ngizokukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani lokho kamuva. Futhi singamane sigcine izingxoxo ezahlukahlukene ngqo zaleli khasi.
Iphutha le-xbox 80151909
Njengoba leli yikhasi lasekhaya lewebhusayithi yami ethile, kungahle kube nemibuzo abantu abangayibuza beyibuza ngaso sonke isikhathi. Mhlawumbe kunemicu ngaphambili engicabanga ukuthi ingazuzisa wonke umuntu. Le yindlela engingakopisha futhi nginamathisele ngayo izixhumanisi ezahlukahlukene kulezo zingxoxo ezithile.
Ake ngikubonise ukuthi ungakwenza kanjani lokho Ake sibuyele emuva eqenjini lethu le-CEO Connection. Isibonelo, uma ngifuna ukwethula ingxoxo ka-Andy mayelana nokuqashwa okuhlukahlukene lapha ngoba ngumbuzo ojwayelekile, ngingachofoza i-ellipsis bese ngiya ku-'Buka Ingxoxo '. 'Buka Ingxoxo' izongibhekisa ekhasini eliseYammer ngokuyisisekelo elikhombisa wonke umucu futhi lingisize ngiqoqe konke okuqukethwe endaweni eyodwa.
Ngingathatha le-url ngiyikopishe bese ngiyinamathisela kuleli bhokisi lapha ngizobona ikhadi livela ekhasini khona manjalo futhi ngibona abantu abaningi bephendula lapha futhi abantu abaningi bathande intambo oyisebenzisayo le njengesisekelo sokuba netshe lokunyathela izingxoxo zakho. Ngibuyela ezingxoxweni eziphezulu manje futhi uzobona ukuthi singakuletha lokho ngokuzenzakalela futhi ngizoshaya shicilela futhi sizokweqa phansi uzobona ukuthi izingxoxo zethu seziqhamuke lapha. Uma ngifuna ukuvula le ngxenye yewebhu bese ngiyayihlela, kulula kakhulu ukukwenza.
Njengoba ngishilo ngaphambili, ungahlala ukuguqula lokhu ngakho-ke noma yikuphi ukusetha okusebenzayo, mhlawumbe wenza umkhankaso othile noma ube ne-pi ehlukile Uma ufuna ukugqamisa zonke izingxoxo, ungakushintsha njalo lokho, ngichofoza ku-'Hlela 'lapha' bese uzobona ukuthi le ngxenye yewebhu kulula ukuyihlela, uma ngiphenya ingxenye yewebhu uzobona ukuthi lapha ngithola lesi sithonjana sepensela esincane okungumbhalo wokuhlela futhi singivumela ukuthi ngidlule kulezi zinketho ezahlukahlukene bese ngizishintsha njengawe funa. Uzobona futhi ukuthi sinenye inketho lapha, inguqulo yakudala yezingxoxo. Futhi lokhu kuhlobene nesinye isitayela sokuphakelayo ebesinakho ukutholaka i-Yammer.
lvuvc64.sys amawindi 10
Lokhu kungaba yisinqumo esihle uma ufuna ukubona zonke izingxoxo ziqhubeka nentambo yonke ukuze ubone zombili iziqalisi zentambo noma okuthunyelwe kokuqala okuqale ingxoxo bese zonke izimpendulo zizovela njengengxenye yazo futhi. Lokhu okuphakelayo akusebenzi kuhlelo lokusebenza leselula le-SharePoint. Kuyinto inguqulo yethu yakudala.
Kepha ingasetshenziswa ezimweni eziningi, nakwezinye izimo futhi, kufanele uzame ukukhetha kabanzi okukusebenzela okuhle kakhulu. Kulokhu sizosebenzisa inguqulo yakamuva futhi sincoma lokhu njengokuzenzakalelayo, kepha uma unezinketho ozidingayo inguqulo yakudala, yingakho nathi sinazo. Ngakho-ke ngizohlala nezingxoxo zami eziphezulu, ngizochofoza kuleli khasi bese ngishaya ukushicilela. ungayakha kanjani indatshana entsha yezindaba ngoba uzocabanga ukuthi lezi zingxoxo zenzeka kanjani.
Mhlawumbe ubhale kokuthunyelwe mayelana nombukiso ozayo noma umcimbi osuzokwenzeka, noma mhlawumbe wabelana ngokuthile ohambweni noma kokunye ukuvakasha lapho uthumela khona izindaba. Ngingathumela izindaba kalula ngokuya ku-SharePoint - Ikhasi lasekhaya. Lapho ngichofoza ekhasini lasekhaya le-SharePoint, uyabona ukuthi ngivezwa ngezindlela eziningi, lokhu ngukudla kwami ​​okwenziwe ngezifiso lapha, futhi lezi zihloko zezindaba ezilapha ngenhla zingangami uqobo.
Ngakho-ke zinikwe amandla yiMicrosoft Graph futhi empeleni ingivumela ukuthi ngithole okuqukethwe okungenzeka ukuthi angizange nginyuselwe, kepha ukuqonda ngempela okungangithakazelisa ngokususelwa kulokho esikwenze nontanga yethu. Ngizokwakha iposi elisha lezindaba lapha futhi ngingakhetha isiza engisanda kulakha, kulokhu i-Leadership Connection, futhi lapho ngakha lo myalezo omusha ngikwazi ukubheka izindlela ezahlukahlukene zokufaka ingxenye yewebhu ye-News Article, ungakhetha uhlobo olufanele lokuphakelayo. Kubalulekile ukuba nale ngxoxo kulo mphakathi.
Ngakho-ke cabanga ngokucophelela ngokuthi yiziphi izinketho nokuthi yiziphi izingxoxo ofuna ukuzethula lapha. Ngakho-ke ngingaqamba ikhasi lami lapha futhi ngicabanga ukuthi udaba lwami lwezindaba lumayelana nohambo lwakamuva lwensimu, ngokwesibonelo. Futhi ngakho-ke sichofoza lapha.
Ngizofaka ezinye izithombe ezinhle ukuze ngenze ukusesha iwebhu ngokwesibonelo uma ngifuna ukwenza lokho, ngakho-ke ngilapha ukuzokhetha eyodwa yalezi zizinda. UngowakwaBi. isekela ng futhi ayatholakala nayo yonke imininingwane ye-Creative Commons njengengxenye yawo.
Ngingahudula ukuze ngigxile kulesi sithombe esithile. Ngakho-ke uma kungubuso bomuntu noma yini engifuna ukubukisa ngayo, ngingakwenza lokho. Futhi-ke nginalolu lwazi olukhulu lapha.
Ngingachofoza lapha bese ngifaka ingxenye yewebhu ekukhombisa ukuthi ungawengeza kanjani umbhalo noma izithombe noma ezinye izinhlobo zokuqukethwe ozokuhlunga kusuka ku-Word. Futhi ake siqhubeke nohambo lwakamuva nokuthi lokho esikufundile ukukhuluma. Ngakho-ke manje sengizothayipha nje umbhalo othile bese uzobona ukuthi nginezinketho zokuhlela ezicebile nalapha, ngakho-ke ngingaqiniseka ukuthi lokhu kungakwenza kube yisihloko esiyisibonelo.
Konke-ke lezo zici zakhiwe zangena kuwo. Ngizoqhubeka ngengeze izingxoxo zami zomphakathi manje. Ngakho-ke ngiphenya, ngingenza izinto ezimbalwa ezahlukile uma uhlu lubukeka lude kakhulu ngemuva kwezingxenye ezahlukahlukene zewebhu ovele ubheke lapha bese uthola lokho kuhlangana okujwayelekile.
ukususa isikhangiso sazi
Cabanga futhi mayelana nokuthi ungazithumela kuphi izingxoxo zaleyo ndatshana ku-Yammer. Ngakho-ke kulokhu, ngisazokhetha iqembu lethu le-CEO Connection, futhi ngizothi izingxoxo zakamuva kuphela ezidinga ukuba yingxenye yalo. Futhi ukuze ifomethi yekhadi ibekhona ngokuzenzakalela, yingxenye yekhasi manje ukuthi nginezindaba eziningi zezindaba futhi nazi izingxoxo abakhuluma ngazo.
Uyabona ukuthi ngingachofoza ngithumele ngqo kusuka engxenyeni yewebhu yeYammer. Uma ngenza njalo, ngizofaka umbhalo lapha othi, 'Kuhle ukuzwa ngalolu hambo lwakamuva lwensimu,' futhi lokhu kuzothunyelwa ngqo eqenjini lami leYammer. Thumela 'futhi uzothola isiqinisekiso somlayezo esiwuthumele ku-Yammer, futhi ngingacindezela futhi ukubona ingxoxo eqenjini le-Yammer.
Ngakho-ke kuyindlela enhle yokuthola abantu khona lapho, kepha zonke lezo zingxoxo zihlala endaweni efanayo eYammer, yilezo zonke lezo zingxoxo engizikhethile kuleli qembu le-CEO Connection ezenza kube lula impela. Futhi-ke ngiyabona ukuthi ingxoxo iqhubeka lapha bese uchofoza inkinobho yokuthanda
Ngikushumeka kanjani okuqukethwe ku-SharePoint?
Vumela noma ukhawulele amandla wokushumeka okuqukethwe ku-SharePoint...
Dlulisa amehlo kusizinda sezimpande seqoqo lakho lesayithi.
Chofoza Izilungiselelo. , chofoza Amasethingi Esayithi.
Ekhasini lezilungiselelo zeSayithi, ngaphansi kwe-Site Collection Administration, qhafaza i-HTML Field Security.
Khetha okukodwa kokukhethwa kukho okulandelayo: ...
Ilusizo kakhulu, ikhasi lengxenye yewebhu lilusizo kakhulu ngakho-ke ngiya ezingxenyeni zewebhu impela ngithola ingxenye yewebhu ngaphansi kwesigaba semidiya nokuqukethwe nesihleli sokuqukethwe, uma ubusebenza ku-SharePoint 2007 noma ngaphambili lapho-ke konke nge Made the content content web web part ngakho-ke mhlawumbe uyazi ukuthi uke waba khona isikhashana kodwa uma ungakakwenzi lokho kulungile, ngizokufundisa ukuthi ungayifaka kanjani nje le ngxenye yewebhu ekhasini lesayithi bese uya Uyangena kuyo bese uhlela ingxenye bese ungangeza okuqukethwe okusha kuleyo ngxenye yewebhu futhi njengoba ubona unezinketho ezijwayelekile lapho kepha unezinye izinketho ezintsha lapha.
Ngakho-ke uma ubheka wonke lawo mafayili nemitapo yolwazi ngeke ibonakale uze usethe ukugxila kule ngxenye yewebhu ukuze ube nezingxenye ezimbili zewebhu, ungakuguqula lokho ngokubeka le ngxenye yewebhu ezansi, kepha lokho kungahle kube yinde kakhulu futhi ungahle uthande ukubuka imibhalo eminingi lapho, ukuthi ungangeza kanjani ingxenye yomhleli wokuqukethwe ekhasini le-wiki kanye nakwikhasi lengxenye yewebhu njengolunye lwemiqondo yakho, impela ungawuthola lo mhleli wokuqukethwe ingxenye yewebhu kwenye indawo etholakala lapha - uhlu lwamathikithi wami we-ID. Ungalingeza ukuze ungeze kumafomu. Zombili ifomu elizenzakalelayo kwifomu yokubonisa nefomu lokuhlela, ongaliguqula, nalo liyingxenye yengxenye yewebhu ongayisebenzisa ukwenza lokho Nika amandla Ingxenye Yewebhu Yokuhlela Okuqukethwe.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kukunikeza indawo yokungena ezweni elihle lengxenye yewebhu Yokuhlela Okuqukethwe engizokukhombisa yona amathiphu namasu maduze, ngiyabonga ngokubuka lesi siboniso
Ungashumeka i-HTML ku-SharePoint?
KuhleloIsihlonziikhasi lesipiliyoni sakudala,ungaseusebenzisa iI-HTMLingxenye yewebhu ukuzeshumekaeyakhoI-HTMLikhodi ngqo.Uma ubasebenzisa ulwazi lwesimanje,wenauzodinga ukuqamba kabusha igama lesandiso sefayela lekhasi lakho lewebhu kusuka ku-I-HTMLkuya ku-ASPX.Jul 13 2020
Ingabe ikhasi le-SharePoint lingakhonjiswa ku-iframe?
Ikhasi elivela ku-SharePoint 2013 (kusengaphambili) lingakhonjiswa ku-iframe kusuka ekhasini elibanjwe kwesinye isizinda, uma ukulawulwa okulandelayo kungezwa ekhanda lekhasi eliyinhloko: Kodwa-ke uma lokhu kulawulwa kungangezwanga ekhasini eliyinhloko, bese sithola nephutha elishiwo ngenhla.
/ Ungalifaka kanjani ikhasi lewebhu ku-SharePoint?
Uma ufuna ukufaka ikhasi lewebhu ekhasini le-SharePoint Online, ungachofoza Faka & gt; Ingxenye yeWebhu & gt; ukhethe ingxenye yokubuka ikhasi lewebhu & gt; ikhethe bese uqhafaza umcibisholo omnyama phezulu ngakwesokudla kwengxenye yewebhu & gt; Hlela ingxenye yeWeb & gt; faka I-URL yekhasi & gt; chofoza isixhumanisi sokuhlola ukuze ubone umphumela.
Kungenzeka ukushumeka i-iframe kuwebhusayithi?
Ngisebenzisa Ingxenye yewebhu yokushumeka ngangizama ukunamathisela ku-URL yesayithi lapho bekufanele ngabe ngisebenzisa umaki we-iFrame HTML. Uma uhlangabezana naleli phutha: Le webhusayithi ayikusekeli ukushumeka kusetshenziswa ikheli nje….
Ungayifaka kanjani ukushumeka iwebhu Ingxenye 2 ku-SharePoint?
Ungayifaka kanjani i-Embed Web Part 1 Hlela i-SharePoint ikhasi lesimanjemanje, bese uqhafaza uphawu oluthi “+”, bese ukhetha Shumeka Ingxenye Yesigaba 2 Ngakwesokudla, manje uzobona indawo lapho ungashumeka khona ikhodi. 3 Ngokwami, ngishumeka ividiyo kusuka kungxenyekazi yeVimeo.com, ngakho-ke ngiqale ngaya lapho ngathola (ngakopisha) ikhodi yokushumeka yevidiyo. Izinto eziningi ...